I-DJI isungula isicelo ukonwabela ukurekhodwa kweedrones zayo kwiApple TV | Ndisuka mac
I-DJI isungula isicelo ukonwabela ukurekhodwa kweedrones zayo kwiApple TV
Ukuba ngoku ujonga i-drone esemgangathweni ekuvumela ukuba wenze ushicilelo olumnandi, ekuphela kwendlela, enexabiso lemali, iyafumaneka kwi-Chinese firm DJI. Ewe, inkampani yaseTshayina. Inye nje, inkampani yaseTshayina isungula iimveliso ezisemgangathweni ngaphandle kokukopa nabani na. Inkampani yase-China i-DJI isandula ukubhengeza ukumiliselwa kwesicelo esizinikezelwe kubo bonke abasebenzisi bezixhobo zePhantom neMavi, ukuze nawuphi na umnini wayo nayiphi na imifuziselo yesi sixhobo abenakho ukwabelana nelizwe liphela ngemifanekiso abayithathileyo kunye neevidiyo, ukuya kuthi ga kumgangatho we-4k, ukuze Nawuphi na umsebenzisi wesizukulwane sesine i-Apple TV angazonwabela zombini izicwangciso kunye nomgangatho ezi zinto zisinika zona.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba iimodeli zokuqala ze-DJI khange zidibanise eyazo ikhamera, kodwa zinike ithuba lokongeza iGoPro. Kodwa njengokuba iminyaka ihambile, inkampani yaseTshayina yagxila ekwenzeni izixhobo zokurekhoda ezineempawu ezingasenzi siyiphose iGoPro nangaliphi na ixesha. Le ntshukumo ye-DJI yenye yezona zinto zibangela oko I-GoPro izakuzama i-drones yayo yokuqalisa ithamsanqa, ukusilela kwayo kwimodeli yayo yokuqala akuzange kubonwe nangubani na.
Kodwa izicwangciso ze-DJI zokukhuthaza ukuthengwa kwezixhobo zayo azihambi kuphela nge-Apple TV, kuba inkampani ikwasungule isicelo esizinikeleyo seTV zeTV ezilawulwa yiTizen, elinye inyathelo lenkampani yaseKorea apho Iqinisekisa ukuba ityisiwe kancinci ngokuxhomekeka Android, apho isetyenziswa kuphela kwii-smartphones, ngokucacileyo ukuze ingalahleki isabelo sentengiso esenze ukuba ibe yinkokeli yehlabathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-DJI isungula isicelo ukonwabela ukurekhodwa kweedrones zayo kwiApple TV
UMark Gurman uyasisusa kumathandabuzo, eli ayiloxesha lokuthenga iMacBook
I-Apple ifuna igosa eliyintloko lenkqubo ukukhokela inkqubo yosasazo